ktmkhabar.com - बाइक किन्दै हुनुहुन्छ ? डिस्क र ड्रम ब्रेकका बारेमा जान्नुहोस्
बाइक किन्दै हुनुहुन्छ ? डिस्क र ड्रम ब्रेकका बारेमा जान्नुहोस्
मोटरसाइकल खरिद गर्दा माइलेज र डिजाइन जति ध्यान दिइन्छ त्यो भन्दा बढी सुरक्षा प्रणालीमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । मोटरसाइकलमा भएका विभिन्न सुरक्षा प्रणालीमध्ये सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने ब्रेकिङ सिष्टममा हो । ब्रेक सबैभन्दा सम्वेदनशिल पक्ष हो । प्रायजसो मानिसहरु मोटरसाइकल खरिद गर्दा डिस्क ब्रेक र ड्रम ब्रेकमा कन्फ्यूजन हुने गर्छन् । दुबै ब्रेकिङ भएका बाइकलाई उत्तिकै राम्रो भनेर प्रचार गरिरहेका हुन्छन । यस्तो अवस्थामा कुन बे्रक भएको मोटरसाइकल खरिद गर्दा ठिक हुन्छ भनेर क्रेताहरु दोधारमा पर्ने गरेको पाइन्छ ।
कुन ब्रेक ठिक हुन्छ त ?
डिस्क ब्रेकड्रम ब्रेकमोटरसाइकल